တွေ့မြင်ရခဲတဲ့`Star Ruby´ကြယ်ပတ္တမြားအကြောင်းတစေ့တစောင်း `Star Ruby´ဆိုတာကတော့ ပတ္တမြားအမျိုးအစားတွေထဲမှာမှ တွေ့မြင်ရခဲလွန်းပြီး ဂြိုလ်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလည်းရှိတဲ့ ပတ္တမြားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်ပတ္တမြားဟာဆိုရင် သူ့ရဲ့ကျောက်မျက်နှာပြင်ကို ရွေ့လျားလိုက်တိုင်းမှာ လက်တံခြောက်ခုပါရှိတဲ့ ကြယ်ပုံစံအလင်းတန်းလေးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုလည်း တွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့…
ကမ္ဘာပေါ်ကအရှားပါးဆုံးကျောက်တွေထဲမှာပါဝင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာသာထွက်ရှိတဲ့ `Painite´ပိန်းနိုက်ကျောက်အကြောင်း
ကမ္ဘာပေါ်ကအရှားပါးဆုံးကျောက်တွေထဲမှာပါဝင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာသာထွက်ရှိတဲ့ `Painite´ပိန်းနိုက်ကျောက်အကြောင်း ပိန်းနိုက်ကျောက်တွေဟာ လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာသာထွက်ရှိတဲ့ ကျောက်အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ပိန်းနိုက်ကျောက်တွေကိုတော့ ဗြိတိန်ကျောက်မျက်ပညာရှင်Arthur Charles Davy Pain(အာသာချားလ်စ်ဒေးဗစ်ပိန်း)ကနေပြီးတော့ ၁၉၅၁ခုနှစ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၅၇ခုနှစ်မှာတော့ ကျောက်မျက်ရတနာအမျိုးအစားတစ်မျိုးအဖြစ်စတင်ကာမိတ်ဆက်ခြင်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။…
သဘာဝအရရွှေဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာလဲ? ရွှေဆိုတာကတော့ လူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ လူသိအများဆုံး တွင်းထွက်ရတနာလို့ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ ရွှေဟာဆိုရင် တောက်ပလွန်းတဲ့ ရွှေဝါရောင်အရောင်အသွေးနဲ့ပြည့်စုံနေတာကြောင့် လူကြ်ုက်များရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရဲ့ ဓာတုသင်္ကေတဖြစ်တဲ့ `Au´ကတော့ လက်တင်ဘာသာစကား`aurum´ကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး `နေတောက်ပချိန်´လို့အဓိပ္ပါယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။…
နဝရတ်ကိုးပါးဆိုတာဘာလဲ? နဝရတ်ကိုးပါးဆိုသည်မှာတကယ်တော့ ကျောက်မျက်ရတနာကိုးမျိုးကိုတင်စားကာခေါ်ဆိုထားခြင်းမျိုးပါပဲ။ နဝရတ်ဆိုတာကတော့ နဝရတန ဟူသော ပါဠိမှလာ၍ ရတနာကိုးပါးဟု အနက်အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ နဝရတ်ကိုးပါး ချယ်ထားသော လက်စွပ်ကိုလည်း နဝရတ်လက်စွပ် ဟုခေါ်ဆိုလေ့ရှိကြတာပါ။ ကဝိလက္ခဏာ…
မြန်မာ့နီလာကျောက်တွေအကြောင်းတစေ့တစောင်း `Burmese Sapphire´လို့ခေါ်ဆိုကြလေ့ရှိတဲ့ မြန်မာ့နီလာကျောက်တွေမှာဆိုရင် အပြာရောင်နီလာကျောက်တွေဟာ အရည်အသွေးအရအလွန်ကောင်းမွန်ကြပြီး `တော်ဝင်တဲ့အပြာရောင်နီလာကျောက်´လို့လည်း ညွှန်းဆိုခံရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မြန်မာ့နီလာကျောက်တွေဟာ ကြည့်ရသူရဲ့အမြင်မှာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ တခြားကျောက်များထက်သာလွန်စွာတောက်ပနေလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ခြွင်းချက်မရှိတဲ့အရည်အသွေးတွေကြောင့် ၎င်းနီလာကျောက်ဟာ နက္ခတ်ဗေဒင် အသုံးပြုမှုအတွက်လည်း…
`Burmese Rubies´လို့အမည်တွင်တဲ့ မြန်မာ့ပတ္တမြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိသင့်သည့်အချက်(၅)ချက်
`Burmese Rubies´လို့အမည်တွင်တဲ့ မြန်မာ့ပတ္တမြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိသင့်သည့်အချက်(၅)ချက် မြန်မာ့ပတ္တမြားတွေဟာ အရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာရဲဝံ့စွာနေရာယူနိုင်စွမ်းရှိပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကျောက်မျက်ရတနာတွေထဲမှာလည်း မြန်မာ့ပတ္တမြားတွေဟာ ပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ ဂုဏ်အရည်အသွေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာ့ပတ္တမြားတွေအကြောင်းသိသင့်သိထိုက်တာတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁)မြန်မာ့ပတ္တမြားတွေရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အရောင်အသွေးဟာ…
ကျောက်စိမ်းကို ဘယ်လိုမျိုးအဆင့်ခွဲခြားမလဲ ကျောက်စိမ်းဆိုတဲ့`Jade´ဟာ လူတွေအလွယ်ခေါ်ယူနေကြတဲ့အခေါ်အဝေါ်သာဖြစ်ပြီးအမှန်စင်စစ်မှာတော့ Jadeite(ဂျေတိုက်ကျောက်စိမ်း)နဲ့ Nephrite(နက်ဖရိုက်ကျောက်စိမ်း)ဆိုပြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ Jadeite(ဂျေတိုက်ကျောက်စိမ်း)ကသာကျောက်စိမ်းရဲ့အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုတွေ သာလွန်စွာရှာတွေ့နိုင်တာမို့ ကျောက်စိမ်းကို အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဟာ ဂျေတိုက်ကျောက်စိမ်းကိုအဆင့်သတ်မှတ်ကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ `A´အဆင့်ရှိတဲ့ကျောက်စိမ်းကတော့ အရည်အသွေးအရအဆင့်အမြင့်ဆုံးလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ကျောက်စိမ်းကိုအဆင့်ခွဲရာမှာ`A,B…
ကျောက်စိမ်းတွေဟာ ကျောက်မျက်ရတနာနှစ်သက်သူတွေတင်သာမကပဲ လူတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာပါ အမည်တွင်အောင်လောက်ကို တန်ဖိုးရှိပြီး လူသိများတဲ့ကျောက်မျက်ရတနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်စိမ်းဟာ တရုတ်ပြည်မှာ နှစ်ပေါင်းလေးထောင်လောက်ကတည်းက အလွန်ပင်လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့လိုမျိုး ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကျောက်စိမ်းတွေဟာ အရည်အသွေးအရ အဆင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းလည်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။…